संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् ।संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फस्छ, फस्छ ।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका नागरिकको सोचाई हुन्छ,- आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँ, आफ्नो एउटा सानो घर हाओस्, बिरामी पर्दा सामान्य उपचार गर्न पाइयोस् ।समाजमा आनो प्रतिष्ठा हाओस् । धेरैको यस्तै चाहना हुन्छ । तर पैसा कमाउने विषय त्यत्ति सहज भने छैन । यसमा केही नयाँ सोच र तरिका जरुरी पर्दछ ।
संसारभरमा नै पैसा कमाउन नचाहने मानिस कमै होलान् । पैसा कमाउनका लागि कोशिसि पनि आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आनो क्षमता बढाउनु जरुरी हुन्छ ।क्षमताको प्रयोग गरेर रोजगारी या कारोवार गर्नु उत्तम हुन जान्छ । त्यसबाट बचत तथा लगानीका लागि थप अवसर समेत खोज्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका जानकाहरु भन्छन् पैसा कमाउनका लागि सपना मात्रै देखेर पनि हुँदैन । त्यसका लागि सही र सहज प्रयास समेत गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सपना देख्नुस् : सपना देख्नेले मात्रै समाजमा ठूलो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा र पैसा समेत कमाउन सक्छ । सपना नदेख्ने र महत्वाकाक्षा नराख्नेले समाजमा कुनै पनि प्रकारको प्रगति गर्न स्क्दैन । सपना र महत्वाकाक्षाले मात्रै तपाईको दायरलाई फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्छ । यदि तपाई केही ठूलो काम गर्ने र सपना देख्नुहुन्छ तब तपाईलाई त्यसले केही न केही थप मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ । सपना देख्नले नै त्यसलाई पूरा गराउन हरसम्भव प्रयास गर्दछ ।आफूलाई सफल बनाउन प्रयत्न गर्न स्क्छ । तपाईको त्यस्तो सपनाको कसरी पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तपाईलाई उपयुक्त लाग्ने योग्य व्यक्तिको समेत सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
आफ्नो क्षमताको पहिचान: जानकारहरु भन्छन्, तपाईको क्षमता, योग्यता के हो त्यो पहिचान गर्नुस् । त्यसले तपाईलाई सफल हुन मद्दत मात्रै गर्दैन, मार्गनिर्देशन समेत गर्दछ । तपाई आनै बारेमा यो जान्न जरुरी छ कि तपाई सबैभन्दा सहज र सपजलो तरिकाले के कमा गर्न सक्नुहुन्छ ।तपाईले मनदेखि नै गरेको काम तथा क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाईले खोजेको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्नुस कि जीवनमा सफलता हासिल गर्न वा पैसा कमाउनका लागि मतिस्कलाई सही दिशामा लगाउन जरुरी हुन्छ ।
कडा मेहनतको विकल्प छैन: पैसा कमाउने विषय सजिलो र सहज छैन । त्यसका लागि कडा मेहनत र डेडिकेशनको जरुरी पर्दछ । असाध्यै तल्लो तलबाट माथि उठेका संसारका ठूला मान्छेहरुले जीवनमा गरेको संघर्षका कथा पढ्नुस । दुःखबाट सफलता हासिल गरेर व्यक्तिको कथा र जीवन संघर्षले तपाईलाई प्ररित गर्दछ ।तपाईको क्षमता बढाउन र मेहनत गर्नका लागि त्यसले तपाईलाई प्रेरित गर्दछ । वारने बफेट हुन वा अमेजनका मालिक वा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका मालिक मुकेश आम्बानीले सपना देखेका कारण नै सफलता हासिल गरेका हुन् ।कुशलतापूर्वक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । सफलता हासिल गर्नका लागि तपाई सधै तत्पर समेत हुनुपर्दछ । तपाईको सपना पूरा गर्न कडा मेहनत गरेपछि त्यसले मात्रै स्वर्णिम भविस्यको उज्यालो स्म्भावना तय गर्न सक्छ ।
टोकियोमा नेपालीद्वारा संचालित रेष्टुरेन्टमा २ भारतीय मृत भेटिए